အရင် templateမှာ ထည့်ထားတဲ့ headerကပုံရယ်။
footer ကပုံရယ်က ripwayကို hostလုပ်ပြီးတင်ထားတာပါ။
အခု အဲဒီsiteက ဘာထကြောင်လဲမသိဘူး။ link လို့မရပါဘူး။
ပါတယ် templateအသစ်လေး ပြောင်းလိုက်ရင် ကောင်းမလားလို့
စိတ်မကောင်းပါဘူး။ အရင်ပုံတွေပြန်ရဖို့ ကြိုးစားအု့းမယ်။
အခုတော့ သည်းခံပြီးဖတ်လိုက်ပါနော်။ ပြန်ပြောင်းပေးပါမယ်။
thuzar October 3, 2012 at 4:05 PM
Many thanks to LULU. I can create enjoyable food in accordance with your enjoyable dishes.
လုလု October 4, 2012 at 2:50 PM
I am also very glad to hear about ur enjoyable dishes. Thank you and let me invite you to visit my kitchen again.